OTU ESI CHỌPỤTA ỌNỌDỤ DISKI DISKI: OGOLOGO OGE Ọ GA-ADỊRU - DISK - 2019
A na-ebu amụma banyere ịdọ aka ná ntị! Iwu a kachasị mma maka ịrụ ọrụ na draịva siri ike. Ọ bụrụ na ị maara na ọ ga-adaba na draịvụ dị otú ahụ ga-ada, mgbe ahụ, ihe ize ndụ nke ọnwụ data ga-adị ntakịrị.
N'ezie, ọ dịghị onye ga-enye 100% nkwa, ma na oke ogo nke puru omume, ụfọdụ omume nwere ike nyochaa S.M.A.R.T. (otu ngwanrọ na ngwaike nke nyochaa ọnọdụ nke diski diski) ma nweta nkwubi okwu banyere oge ole ọ ga-agwụ.
N'ozuzu, e nwere ọtụtụ mmemme maka ịme nchọpụta diski dị otú ahụ, ma n'isiokwu a, achọrọ m ịnọ na nke kachasị anya ma dị mfe iji. Ya mere ...
Esi mara ọkwa nke disk diski
Onye Mmepụta saịtị: //hddlife.ru/
(Site n'ụzọ, ma e wezụga HDD, ọ kwadoro diski SSD)
Otu n'ime mmemme kachasị mma maka nlekota na nlekota nke diski ike. Ọ ga-enyere aka n'oge iji chọpụta ihe iyi egwu ma dochie draịvụ ike ahụ. Karịsịa, ọ na-adọrọ mmasị na nghọta doro anya: mgbe ebido na nyochaa, HDDlife na-enye akụkọ na ụzọ dị mfe: ị na-ahụ pasent nke diski "ahụike" na arụmọrụ ya (ihe kachasị mma, n'ezie, bụ 100%).
Ọ bụrụ na arụmọrụ gị karịrị 70% - nke a na - egosi ọnọdụ dị mma nke diski gị. Dịka ọmụmaatụ, mgbe afọ ole na ole gachara (ọrụ nke ọma), usoro ahụ nyochachara ma kwubie: diski diski a dị ihe dị ka 92% ike (nke pụtara na ọ ga-adịru, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ịmanye majeure, ma ọ dịkarịa ala ọtụtụ) .
HDDlife - draịvụ ike dị mma.
Mgbe ịmalite, a na-ebelata ihe omume ahụ na tray na-esote elekere na ị nwere ike nyochaa ọnọdụ diski ike gị mgbe niile. Ọ bụrụ na achọpụtara nsogbu ọ bụla (dịka ọmụmaatụ, ike disk dị elu, ma ọ bụ obere ohere fọdụrụ na draịvụ ike), usoro ihe a ga-agwa gị window windo. Ihe atụ n'okpuru.
Gaa na HDDLIFE maka ịpụ na diski diski. Windows 8.1.
Ọ bụrụ na usoro nyochaa ma nye gị windo dị ka nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a, ana m enye gị ndụmọdụ ka ị ghara igbu oge ndebe ndabere (ma dochie HDD).
HDDLIFE - data na diski ike dị n'ihe ize ndụ, ngwa ngwa i denye ya na mgbasa ozi ndị ọzọ - mma!
Onye Mmepụta saịtị: http://www.hdsentinel.com/
Ngwa a nwere ike ịrụ ụka na HDDlife - ọ na-edekwa ọkwa nke disk ahụ. Ihe kacha emetụ mmasị na usoro a bụ ihe ọmụma dị na ya, tinyere mfe maka ọrụ. Ee ọ ga-aba uru dịka onye ọrụ novice, ma nwee ezigbo ahụmahụ.
Mgbe ịmalitere Hard Disk Sentinel na nyochaa usoro ahụ, ị ​​ga-ahụ windo windo nke usoro ihe omume ahụ: a ga-egosipụta draịva siri ike (gụnyere HDDs dịpụrụ adịpụ) n'aka ekpe, a ga-egosipụta ọkwa ha n'aka nri.
Site n'ụzọ, ọrụ na-adọrọ mmasị, dịka amụma amụma rụrụ, dị ka ihe atụ, na nseta ihuenyo dị n'okpuru, amụma ahụ karịrị 1000 ụbọchị (nke a bụ ihe dịka afọ atọ!).
Ọnọdụ diski diski dị mma. Achọghị nsogbu ma ọ bụ adịghị ike. Ọ dịghị rpm ma ọ bụ chọpụta njehie data.
Enweghị ihe a chọrọ.
Site n'ụzọ, usoro ihe a emejuputawo ezigbo ọrụ bara uru: gị onwe gị nwere ike ịtọ ụzọ maka okpomọkụ dị oké njọ nke diski ike ahụ, mgbe ọ ruru, Hard Disk Sentinel ga-agwa gị ụfe!
Sentinel siri ike: oke oyi (gụnyere oke maka oge niile a na-eji diski).
Ezigbo uru iji nyochaa ọnọdụ nke draịva siri ike. Ihe nyochaa n'ime ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịmara tupu ọdịdị nke nsogbu mbụ ahụ na diski (site na ụzọ, usoro ihe omume ahụ nwere ike ịgwa gị nke a ọbụna site na e-mail).
Ọzọkwa, na mgbakwunye na ọrụ ndị bụ isi, a na-arụ ọrụ ụfọdụ inyeaka n'ime usoro ihe omume ahụ:
- nkpuchi disk;
- ihichapu diski site na mkpofu na faịlụ nwa oge (mgbe niile);
- hichapụ akụkọ ihe mere eme nke nleta na saịtị na Intaneti (ọ bara uru ma ọ bụrụ na ị nọghị na kọmputa ma achọghị ka onye ịmara ihe ị na-eme);
- enwekwara ụlọ ọrụ ndị ewuru iji belata mkpọtụ disk, ntọala ike, wdg.
Ashampoo HDD Control 2 window screenshot: ihe niile dị na diski diski, ọnọdụ 99%, arụmọrụ 100%, okpomọkụ 41 gr. (Ọ bụ ihe na-achọsi ike na okpomọkụ dị ihe dị ogo 40, ma usoro ihe omume ahụ kwenyere na ihe niile dị maka ụdị disk a).
Site n'ụzọ, usoro ihe omume ahụ zuru ezu na Russian, echere n'echiche - ọbụna onye ọrụ novice PC ga-achọpụta ya. Lezienụ anya na ọnọdụ okpomọkụ na ọkwa ọnọdụ na windo nke usoro ihe omume ahụ. Ọ bụrụ na mmemme ahụ na-enye njehie ma ọ bụ ọnọdụ a na-eme atụmatụ dị oke ala (+ ma e wezụga, enwere mpi ma ọ bụ mkpọtụ sitere na HDD) - M nwere ike ikwu na mbụ iji detuo data niile na mgbasa ozi ndị ọzọ, wee malite ịgwọ diski ahụ.
Onye Nyocha Onye Na-arụsi Ike
Ebe nrụọrụ weebụ: http://www.altrixsoft.com/
Ihe dị iche iche nke usoro a bụ:
1. Mbelata na ịdị mfe: ọ dịghị ihe dị oke n 'usoro ihe omume a. Ọ na-enye ihe ngosi atọ na pasent: a pụrụ ịdabere na ya, arụmọrụ, ma ọ bụ njehie;
2. Na-enye gị ohere ịchekwa akụkọ banyere nsonaazụ ahụ. Enwere ike igosi ozi a na ndị ọrụ (ọkachamara) karịa ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ha chọrọ enyemaka ndị ọzọ.
Onye na - enyocha ihe nhụsịrị ike - nyochaa ọnọdụ nke diski ike.
Ngwurugwu di mfe, ma olile anya iji nyochaa onodu nke uzo siri ike. Ọzọkwa, ọ na-arụ ọrụ ọbụna n'ọnọdụ ndị ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ajụ, wepụ na njehie.
Ihe omume a na-akwado ọtụtụ asụsụ, adịghị ejupụta na ntọala, mere na ụdị nke minimalism. N'otu oge ahụ, ọ nwere ọrụ dị oke egwu, dịka ọmụmaatụ, belata ọkwa ụda diski, ịchịkwa okpomọkụ, wdg.
Ihe ọzọ dị mfe bụ ihe ngosi nke ọnọdụ ahụ:
- acha anụnụ anụnụ (dị ka na nseta ihuenyo n'okpuru): ihe niile dị n'usoro;
- agba odo: nchegbu, ịkwesịrị ime ihe;
- uhie: i kwesiri ime ngwa ngwa (oburu na i nwere oge);
- isi awọ: usoro ihe omume ahụ emezughị ịgụta ihe.
CrystalDiskInfo 2.7.0 - nseta ihuenyo nke isi mmemme windo.
Ebe nrụọrụ weebụ: http://www.hdtune.com/
Usoro a bara uru nye ndị ọkachamara nwere ahụmahụ: ndị, na mgbakwunye na ngosipụta nke "ahụike" nke diski ahụ, chọkwara ịchọta diski dị elu, nke ị nwere ike ịmatakwu ihe niile na njirimara. Ọzọkwa, a ghaghị icheta na usoro ahụ, na mgbakwunye na HDD, na-akwado ngwa SSD ọhụrụ.
HD Tune na-enye otu ihe dị mma iji mara ngwa ngwa ịlele diski maka njehie: a na-enyocha 500 GB disk n'ihe dịka minit 2-3!
HD EBE: nyocha ngwa ngwa maka njehie disk. A gaghị ekwe ka red "disk" ọhụụ ọhụrụ ahụ kwe.
Ihe di oke mkpa bu ihe nlele nke ngwa nke iguta na ide ihe diski.
HD Tune - lelee ọsọ nke disk.
Ọfọn, ọ gaghị ekwe omume ịhụ na taabụ nwere nkọwa zuru ezu na HDD. Nke a bara uru mgbe ịkwesịrị ịmara, dịka ọmụmaatụ, ọrụ akwadoro, nkwụsị / ụyọkọ, ma ọ bụ ọsọ ọsọ nke diski, wdg.
HD Tune - ozi zuru ezu gbasara disk diski.
N'ozuzu, enwere ọ dịkarịa ala ka ọtụtụ ụlọ ọrụ dị otú ahụ dị. Echere m na ọtụtụ n'ime ndị a ga-ezuru karịa ...
Otu ihe ikpeazụ: echefula ịmepụta akwụkwọ ndabere, ọbụlagodi na a na-atụle ala nke diski dịka ọmarịcha na 100% (ọbụlagodi ihe kasị mkpa na ihe bara uru)!
Ọrụ na-aga nke ọma ...